ဇနီးဖြစ်သူနန္ဒာလှိုင် ရုတ်တရက်ဆေးရုံတက်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း အသိပေးလာတဲ့ ဦးဇေသီဟ - Han Nyein Oo
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောနန္ဒာလှိုင်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။သူမသရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများစွာရှိတာကြောင့် သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်အခိုင် အမာရရှိထားသူပါ။အောင်မြင်မှုများစွာရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကခုဆိုရင်သူမချစ်တဲ့မိသားစုလေးနဲ့ ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေကတော့ တစ်ကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကို အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ရပြီး အောက်ဆီဂျင်မရတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင် အလွယ်တကူမရတဲ့ အတွက်ကြောင့် လူအများ အပြားလည်း သေဆုံးခဲ့ရတာကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့မြင်ကြားသိရပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေကြတဲ့ အရေးပေါ်လူနာများအတွက် သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်တို့ မိသားစုက အောက်ဆီဂျင်စက်များ အခမဲ့ ငှားရမ်းပေးခဲ့တဲ့အပြင် အောက်ဆီဂျင် အလွယ်တကူ ဖြည့်တင်းနိုင်အောင်အောက်ဆီဂျင် စက်ရုံ တည်ဆောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်.
လက်ရှိမှာတော့ နန္ဒာလှိုင်တို့ မိသားစုရဲ့ အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံဟာ စတင်လည်ပတ်နေပြီး လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ လူမှုရေး ပရဟိတအသင်းတွေကို မျှဝေလှူဒါန်းနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာလည်း နန္ဒာလှိုင်က ဆေးရုံတက်ပြီးဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်လို့လည်း ဦးဇေသီဟ ကသူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ တင်လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာရောဂါနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့တော့ သေချာမပြောပြထားပါဘူး. ဒါ့ကြောင့် စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးလည်း နန္ဒလှိုင် နေပြန်ကောင်းဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါအူံးနော်.
ပရိတျသတျကွီးရေ…နိုငျငံကြျောရုပျရှငျသရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောနန်ဒာလှိုငျဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှခေဈြခငျအားပေးရတဲ့နိုငျငံကြျောအနုပညာရှငျတဈဦးပါ။သူမသရုပျဆောငျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဇာတျကားမြားစှာရှိတာကွောငျ့ သူမကိုခဈြတဲ့ပရိသတျအခိုငျ အမာရရှိထားသူပါ။အောငျမွငျမှုမြားစှာရရှိပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ သူမကခုဆိုရငျသူမခဈြတဲ့မိသားစုလေးနဲ့ ဘဝကိုအေးခမျြးစှာဖွတျသနျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာပွညျသူတှကေတော့ တဈကြော့ပွနျ ဖွဈပှားလာခဲ့တဲ့ ကိုဗဈတတိယလှိုငျးကို အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ရပွီး အောကျဆီဂငျြမရတဲ့ ပွဿနာတှနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။ အောကျဆီဂငျြ အလှယျတကူမရတဲ့ အတှကျကွောငျ့ လူအမြား အပွားလညျး သဆေုံးခဲ့ရတာကို စိတျမကောငျးစှာ တှမွေ့ငျကွားသိရပါတယျ။ လတျတလောမှာလညျး အောကျဆီဂငျြလိုအပျနကွေတဲ့ အရေးပျေါလူနာမြားအတှကျ သရုပျဆောငျ နန်ဒာလှိုငျတို့ မိသားစုက အောကျဆီဂငျြစကျမြား အခမဲ့ ငှားရမျးပေးခဲ့တဲ့အပွငျ အောကျဆီဂငျြ အလှယျတကူ ဖွညျ့တငျးနိုငျအောငျအောကျဆီဂငျြ စကျရုံ တညျဆောကျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျနျော.
လကျရှိမှာတော့ နန်ဒာလှိုငျတို့ မိသားစုရဲ့ အောကျဆီဂငျြစကျရုံဟာ စတငျလညျပတျနပွေီး လိုအပျနတေဲ့ ပွညျသူတှနေဲ့ လူမှုရေး ပရဟိတအသငျးတှကေို မြှဝလှေူဒါနျးနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနလေ့ေးမှာလညျး နန်ဒာလှိုငျက ဆေးရုံတကျပွီးဆေးကုသမှု ခံယူနရေတယျလို့လညျး ဦးဇသေီဟ ကသူ့ရဲ့ဖဘေု့တျစာမကျြနှာမှာ တငျလာခဲ့ဖွဈပါတယျ။ ဘာရောဂါနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနရေတယျလို့တော့ သခြောမပွောပွထားပါဘူး. ဒါ့ကွောငျ့ စာဖတျပရိသတျကွီးလညျး နန်ဒလှိုငျ နပွေနျကောငျးဖို့ ဆုတောငျးပေးကွပါအူံးနျော.
UN ကိုယ်စားလှယ်နေရာကို သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲ ဆက်လက်တာဝန်ယူရတော့မည်